Izindlela eziyi-10 u-Ananya Panday Aced Isitayela Sasehlobo Njenge-Pro - Isitayela Seceleb
Izindlela eziyi-10 u-Ananya Panday Aced Isitayela Sasehlobo Njenge-Pro
10 Ways Which Ananya Panday Aced Summer Style Like Pro
Esikhathini esingaphezu konyaka nje, u-Ananya Panday, owenze i-Bollywood debut neStudent Of The Year 2 ngo-2019 usheshe wakhuphuka ohlwini olugqoke kahle kakhulu ngenxa yobuntu bakhe obuthathelanayo, isimilo sakhe esilula nokungagunci kwakhe. Ngemuva kwakho konke, naye usazi kahle lokho kusayina 'It-girl' penchant yokubukeka okungajwayelekile okugcina kuguqula wonke amakhanda. Ngenkathi umfana oneminyaka engu-22 ekhona lapho enza izitatimende ngekhabethe lakhe lemfashini. Kungaba okwezingubo zobuzwe noma ezokulala, kusobala ukuthi inkanyezi encane iyingane eyi-2000s eyiqiniso, ngakho-ke akumangazi ukuthi izimisele ngempela ngezingubo zokuphumula kanye nezitayela zezingubo zasemgwaqeni ezinhle kakhulu.
Ukube i-India ibineqembu layo leJenner-Hadid-Bieber, umlingisi osemusha ubengaba yingxenye yalo, uma kubhekwa ukuthi uvuselelwa njalo ngezimfashini zakamuva nezintelezi zomphakathi ngezinketho zakhe ezifashisayo. Ukusuka ezikibheni zodayi, izigqoko ezidlalayo nezingubo zezitatimende kuya kuma-neon denims akukho ukubukeka i-diva engazange ikwazi. Uma umkhuba # wokubuya emuva usedolobheni, msayine ngawo ubonakalise ubuciko bokugqoka izibuko ezincane kaningi. Ukwenza i-ante, ufakela ukubukeka kwakhe ngezindophi zegolide, ilokhethi entekenteke yesikhumba nesikhumba esincanyiswe yilanga.
Ukusuka entombazaneni-elandelayo nakubani-leyo-ntombazane, uPanday nakanjani usuqhamuke kude kakhulu ne-Bollywood debut futhi usibonisile isitayela sakhe kusukela lapho. Owesifazane futhi ongahlelekile, inkanyezi yakwaGen Z ibonakala iyithanda imfashini njengoba yenza amafilimu. Futhi njenganoma iyiphi i-zoomer enhle, isitayela asisho ukumzama kanzima. Okuphakelayo komlingisi ku-Instagram kugcwele ukubukeka okungajwayelekile, okubuyisekayo okushada kupholile ngokunethezeka.
Nazi ezinye zokubukeka okuhle kakhulu zeminyaka eyinkulungwane okulungile ukubethela izitayela zemfashini zesitayela sesizini. Thola ugqozi!
IPanday nakanjani iyingxenye yehlombe elilodwa-noma yini, futhi sinobufakazi! Muva nje ufake i-swimsuit ehlombe elilodwa ehlanganiswe nomsele, waveza izifiso zakhe ze-burger ngenkathi egcina ingane epholile isitayela se-block-block iphila. Kusemthethweni yini ukufuna ukudla okulula ngenkathi usuvele ubukeka njengaye?
Izindwangu zokugqoka zikaPanday zeholide kusuka kuma-bikinis ezimbali kuya ku-tie-dye amaningi futhi siyayikhanuka yonke indawo. Ekubukekeni kwakhe okulandelayo, unyakazise isicu esilula esimhlophe ngebhantshi le-chic elimhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka. Manje lokho kuyisethi yokudla okuyisisekelo njalo kudinga ikhabethe lezinkulungwane zeminyaka.
Uma kukhona ukubukeka okukodwa uPanday akwazi ukubulala ngakho konke ngo-elan, kuyisambatho sikasilika esifanelekayo sakwa-Aroka. Umlingisi ufake inombolo ebomvu evuthayo engeke isivumele ukuthi sisuse amehlo akhe kuyena. Khetha le ngubo elungiselelwe ubusuku bonke ukwenza wonke amakhanda ajike.
Ama-co-ord sets yikhodi yokukopela yokubukeka ukuze ubukeke ngokushesha 'uhlanganisiwe' ngaphandle kokuzama nokuzama. Ngokusobala uPanday usemfihlakalweni. Isethi yezimbali ephezulu kanye namasethi wesiketi ukupakisha kwakhe okuyinombolo eyodwa kubalulekile ngamaholide asebhishi. Lesi setha esingenaphutha ngokuqinisekile silungiselele ihlobo sibhaliwe kuyo yonke indawo. Ithiphu yesitayela: Phonsa isigqoko sotshani ukuthola amaphuzu engeziwe!
Ukwenza ukubhazabhaza nge-sunflower yakhe uShivan noNarresh bikini, uPanday wabeka isibalo sakhe esinamathoni nesincane ekubonisweni okugcwele! Izibuko zelanga zeRetro kanye nesikhumba esibonakalayo kwengeze i-chic quotient ekubukekeni. Yebo, i-bikini yakhe emnandi futhi enamandla iyikho konke okwehlobo!
Intsha, inamandla, i-effervescent - lawa magama ama-3 ngokuyisisekelo angafaneleka ukuchaza isitatimende sikaPanday. Ukhombisa ukuthi ungazifaka kanjani izinombolo zodayi ombala nemibala egqamile ngomusa omkhulu. Manje leyo yindlela ephelele yokwamukela ihlobo ngesitayela.
Ukwamukela unyaka omusha, uPanday wanyakazisa ingubo yomzimba ehlanganiswe nokushona kwelanga ayibhala ngomgexo wegobolondo olula. Yilokho impela umbala wombala ikhabethe lethu elidinga ngemuva konyaka wobumnyama.
I-Panday ibukeka njengephupho ngengubo eshelelayo enesinqe esiphakama ethangeni. Ukusho ukuthi ubukeka emangalisa kungaba yinto encane. Isembatho esifanele ubusuku bosuku noma ukubukeka kwe-brunch okungajwayelekile.
U-Panday ungeza i- # oomph njengoba ekhipha konke-okumnyama kubheka ukuphuma kolwandle. Isikhathi sokubekisa lokhu!
UPanday ubelokhu ekhuphula izinga lokushisa futhi kanjani! Umlingisi okhombise uthando lwakhe ngezingcezu zokuhlanganisa ezihambisanayo, ubegqoke isiqongo sesivuno esingaphandle kwehlombe namabhulukwe afanayo anezinqa eziphakeme ngenkathi ekhombisa umhlwenga nezingalo zakhe. Ngenkathi umthunzi onsundu ojulile ungakhohlisa ukuphuma, sicabanga ukuthi ukwazile ukuwudlala ngaphandle komzamo.
Funda futhi: I-17 ka-Alia Bhatt Ebukeka Ingenakulibaleka Ukukhuthazwa Ngu
amathiphu wemvelo wokukhula kwezinwele ngokushesha
kanjani isisu fat ukunciphisa
i-baking soda ebusweni nsuku zonke